I-china Vertical single-layer emulsification tank Umkhiqizi kanye Nomthengisi | Qiangzhong
I-Single Wall Emulsification Tank
Leli thangi le-emulsification linama-mixer amathathu anyakazisa ama-coaxial, alungele i-homogenization ezinzile ne-emulsification, futhi izinhlayiya ze-emulsified zincane kakhulu. Ikhwalithi ye-emulsification incike kakhulu ekutheni izinhlayiya zihlakazeka kanjani esigabeni sokulungiselela. Izinhlayiya ezincane, ziba buthakathaka ukuthambekela kokuhlanganiswa ngaphezulu, bese ngaleyo ndlela mancane amathuba okuthi i-emulsification ibhujiswe. Ukuncika ekuxubeni kwezinhlayiya eziguqukayo, izimo eziguquguqukayo ze-turbine nezimo zokucubungula, imiphumela yokuxubana ephezulu ye-emulsification ingatholakala.
Umsebenzi wethangi le-emulsification ukuncibilikisa into eyodwa noma ngaphezulu (isigaba esiqinile esincibilikiswa ngamanzi, isigaba samanzi noma i-jelly, njll.) Kwesinye isigaba soketshezi bese usifaka emulsion esitebeleni. Isetshenziswa kakhulu emulsification nasekuxubeni kwamafutha adliwayo, izimpushana, ushukela nezinye izinto eziluhlaza nezisizayo. I-emulsification nokusabalalisa kwezingubo ezithile nopende nakho kudinga amathangi e-emulsification. Ilungele ikakhulukazi ezinye izithasiselo ze-colloidal ezingaxazululeki, njenge-CMC, i-xanthan gum, njll.
Ithangi le-emulsification lilungele izimonyo, imithi, ukudla, amakhemikhali, ukudaya, uyinki wokuphrinta nezinye izimboni. Kusebenza ngokukhethekile ekulungiseleleni nase-emulsification yezinto ezinokuqina okuphezulu kwe-matrix nokuqukethwe okuqinile kakhulu.
(1) Izimonyo: okhilimu, izinto zokugcoba, izindebe zomlomo, ama-shampoo, njll.
(2) Imithi: amafutha okugcoba, ama-syrups, amaconsi wamehlo, ama-antibiotics ； njll.
(3) Ukudla: ujamu, ibhotela, imajarini, njll.
(4) Amakhemikhali: amakhemikhali, izinto zokunamathisela zokwenziwa, njll.
(5) Imikhiqizo edayiwe: i-pigment, i-titanium oxide, njll.
(6) Uyinki wokuphrinta: uyinki wombala, uyinki we-resin, uyinki wephephandaba, njll.
Abanye: izingulube, ama-wax, upende, njll.
itafula elingenhla lireferensi kuphela, lingenza ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
lo mshini ungenza ngezifiso ngokuvumelana nempahla yekhasimende, udinga ukuhambisana nenqubo, efana nokuhlangana
i-viscosity ephezulu, umsebenzi ohambisanayo uqinisa, izinto ezizwela ukushisa njengezidingo.
Umgomo wayo osebenzayo ukuthi amandla we-centrifugal akhiqizwe yi-rotor eshesha kakhulu futhi eqinile ejikelezayo yekhanda le-emulsifying iphonsa okokusebenza kwigebe elincane nelinembile phakathi kwe-stator ne-Rotor kusuka ohlangothini olusabalalayo. Izinto zokwenziwa ngasikhathi sinye zifakwa kumandla we-centrifugal extrusion namandla okuba ahlakazeke, axutshwe futhi afakwe emulsified. Ithangi linezinzuzo zesakhiwo esenziwe ngabantu, ivolumu eyenziwe ngokwezifiso, ukusebenza okulula, ukuphepha kanye nenhlanzeko, nokusebenza okuzinzile. Ihlanganisa ukucheba ngesivinini esikhulu, ukusabalalisa, ukuhlobanisa i-homogenization nokuxuba.
Langaphambilini Ithangi lokuxuba elenziwe ngocingo olulodwa ne-propeller agitator
Olandelayo: Isendlalelo esisodwa sokuhlangana esivaliwe
Ithangi lokuxuba i-emulsification ephezulu kakhulu
Isendlalelo esisodwa ithangi lokuxuba eliphezulu le-shear
Ithagi yokuxuba eqondile eqondile
I-Emulsification Mixing Tank
I-Tank Yokuxuba Ngokwezifiso
Ucingo lokuxubana lokushisa kagesi
Ukushisa kwe-tank kagesi yeselula
Kuqondile ukufudumeza umusi imbiza eboshwe
2000L ungqimba olulodwa lokuxuba ithangi